Usuku lweBitcoin Pizza -I-Binance ibonelela nge-BTC Pizza-eCazoo eyi- $ 52.200
Usuku lweBitcoin Pizza -I-Binance ibonelela nge-BTC Pizza eyi- $ 52.200
Ikhaya » Ikhaya » Usuku lweBitcoin Pizza -I-Binance ibonelela nge-BTC Pizza eyi- $ 52.200
tag: Bitcoin Pizza Usuku
Kwenzeka rhoqo ngonyaka, uSuku lwePitsa yeBitcoin! Awazi ukuba yintoni? Ngulo msitho ububhiyozelwa ukusukela nge-18 kaMeyi ka-2010, umfana kwiforum ehlawulelwe i-pizza ene-10.000 XNUMX Bitcoins. Isiqingatha seebhiliyoni zeedola pizza ... ukuphaphazela. Landela idilesi ukufumana umyalezo wokuqala womsebenzisi we-laszlo. Uluntu lwe-Intanethi, oluthandekayo nolunenkathalo, ke lubhiyozela uSuku lwePitsa yeBitcoin minyaka le nge-18 kaMeyi! Ndiyathemba ukuba i-lazlo ityebile kune-Scrooge Scrooge, kwaye ithathwa yile fosholo.
Ngayiphi na imeko, uBinance ulungiselele inyathelo elikhethekileyo lokuQokelela kunye nokuphumelela kuwo onke amalungu eBinance aqokelele ngempumelelo izithako ezihlanu ezizodwa zokubhaka iPitcoin Pizza: ngale ndlela kunokwenzeka ukuba ubange. isabelo sabo sedama lamawaka angama-52.200 e-BTC.
Ngaba eli lixesha lokuqala lokufunda eCazoo? Wamkelekile!
Ndibhala amanqaku kunye nophando kwihlabathi le-crypto. Le yinjongo yam. Ukusukela ngoko ndisebenzisa iBinance, ukuba ucinga ukusayina ndiyakucela ukuba uyenze ngekhowudi yam yokudlulisa https://www.binance.com/en/register?ref=EV6X8DW5 (i-id yokudlulisela: EV6X8DW5) Kwaye uya kuba ne-20% yekhomishini enesaphulelo ngokukhawuleza, ngonaphakade. Ngoba kutheni?
Kodwa ukuba ufuna ukubhalisa, yenze ngendlela yakho, hayi kuba ndikuxelele okanye kungenxa yomntu othile ku-YouTube onelambo elisemngxunyeni wemoto yakhe. Ukutshala imali kuhlala kubandakanya umngcipheko. Uyakhumbula ngo-1929 e-United States? IiTycoons ezitsiba ngaphandle kwezikhuselo zazingabatyali mali bonke. Badlale nzima, babeka emngciphekweni uninzi, kwaye ke banokulahleka kakhulu. Kodwa utyalomali kufuneka luphantse lube lolwezenzululwazi, ngokoluvo lwam ngakumbi kwicandelo lokucwangcisa: awunakho ukutyala imali ngaphezu kokulahleka. Ngumdlalo oyingozi, kuya kufuneka uyazi ukuba udlala njani. Andinguye umcebisi wezezimali, kwaye ngekhe ndithathe inkululeko yokucebisa ukuba usebenzise imali yakho.
Ndikhuphela amanqaku am, kuphelele apho. Ndingayenza kwincwadana yokubhala, kwimeyile, ndizibeke phantsi komthi onjengeGoethe kwaye ndizigcinele olu lwazi. Kodwa ikakhulu ndafunda olu lwazi kwi-intanethi .. lixesha lokuba ndibuyise into. Ukuba la mazwi am aluncedo kuwe, ndonwabile. Kodwa musa ukutyala nantoni na kuba umntu okwi-intanethi uyayincoma.
Imigaqo kunye nexesha lomsebenzi
Ibhaso elitsha le-Bakers: $ 50 inye (200 abaphumeleleyo bebonke)
Umvuzo wababhaki abanethamsanqa: $ 20.000 yokuphumelela! (Abaphumeleleyo abangama-20 bebonke)
Akukho mntu ulahlekelwe nguMvuzo: Banga isabelo sakho se- $ 22.200 kwi-pool ye-BTC
Ibhaso kwi-Binance 2021 Bitcoin Pizza Day NFT edition limited
Ndingaziqokelela njani izithako?
Yabelana kwimidiya yoluntu ukuze ufumane izithako ezingaphezulu
Yithathe Ngema kwiBinance ukujonga izithako ezifunyenweyo
Imigaqo kunye Ixesha lomsebenzi
Ixesha lokurhweba liqala ngoMeyi 19th 00:00 AM (UTC) ukuya nge-25 kaMeyi 2021 11:59 PM (UTC).
Bonke abasebenzisi abaqeqeshiweyondibhalisa iakhawunti yeBinance Ngexesha lomsebenzi kunye nokupheka i-pizza yeBitcoin (ukuqokelela ngempumelelo zonke izithako ezihlanu ezizodwa) uya kuba nethuba lokuphumelela iidola ezingama-50 kwiithokheni ze-BTC ngentsalela yethamsanqa (ngeLucky Draw - https://www.binance.com/en/support/faq/fd462f034aed44439ef6c636b9aaf345).
Bonke abasebenzisi abafanelekileyo (ngaphandle kwabaphumeleleyo kumvuzo omtsha we-Baker) abapheke ngempumelelo iBitcoin Pizza (ngokuqokelela izithako ezihlanu ezikhethekileyo) ngexesha lomsebenzi baya kuba nethuba lokuphumelela i-1.000 XNUMX yeedola kwiithokheni ze-BTC nge Ukuzoba ngethamsanqa.
Bonke abasebenzisi abafanelekileyo abangaphumeleliyo kwiNew Bakers Reward okanye kwiLucky Bakers Reward bazokwabelana ngebhaso leedola elingama- $ 22.200 kwi-BTC. Isabelo somvuzo siya kubalwa ngokusekwe kumthamo wokuthengisa ngokulinganayo woMsebenzisi ngamnye ofanelekileyo ngokumalunga nomthamo wentengiso opheleleyo wabo bonke aBasebenzisi abaFanelekileyo.
Umvuzo we-BTC womsebenzisi ngamnye ofanelekileyo ulingana nale fomyula: (ivolumu yokuthengisa esebenzayo yomsebenzisi ngamnye / Inani elipheleleyo lokuthengisa elisebenzayo labo bonke abasebenzisi abafanelekileyo) * Itotali yebhaso le- $ 22.200 kwi-BTC
Bonke abasebenzisi abafanelekileyo abaqokelela zonke izithako ezihlanu ezikhethekileyo kwaye babhake i-Pizza yeBitcoin ngexesha lokusebenza baya kulungelwa ukufumana ithamsanqa. Abaphumeleleyo abangamashumi amabini anesibini baya kutsalwa ngeqashiso kwaye baya kuba nakho ukufumana olunye ushicilelo olulinganiselweyo lweNFT nge-22 Julayi 1 (UTC), emva komhla Indawo yokuthengisa esemthethweni yaseBinance NFT iya kuba bukhoma.
Qokelela zonke izithako ezihlanu ezikhethekileyoiphepha lomsebenzi (iphepha lomsebenzi) ukubhaka i-Pizza yeBitcoin. Nje ukuba ugqibile, Uqinisekisiwe ukuba uzuze isabelo se- $ 52.200 kwi-BTC! Iliso lokwenyani, uBinance akachazi ukuba yintoni le yabelo. Mhlawumbi yi0,0004%, kodwa njengoko watsho umakhulu wam "kungcono kunebhokisi lamaqanda kunebhokisi di amaqanda ".
Gqibezela urhwebo lwe ubuncinci i-100 USDT kwizibini ezifanelekileyo BTC / USDT indawo kunye nomda;
OKANYE ubuncinci i-3.000 USDT okanye i-BUSD kwizibini ezifanelekileyo zokurhweba I-USDⓈ-M yexesha elizayo;
OKANYE ubuncinci beekhontrakthi ezingama-30 kwiibini zokurhweba ezifanelekileyo Ixesha lezezimali.
Emva kwentengiselwano nganye efanelekileyo, umsebenzisi angaya kwifayile ye- iphepha lomsebenzi (https://www.binance.com/en/activity/collect) ukuvula isithako esingahleliwe.
Yabelana ngezithako zakho ezingekhoyo kwimidiya yoluntu kwaye ubuze abahlobo bakho ukuba bakuthumele ezongezelelweyo!
Yabelana ngezithako zakho ezongezelelweyo kwimidiya yoluntu kwaye uzithengise kunye nezo ufuna ukupheka i-Bitcoin Pizza efanelekileyo.
Imigaqo nemiqathango inokujongwa kwiBinance.
Isaphulelo kwimirhumo yeBinance
I-Binance Coin (BNB): Uphawu lwendalo lolona tshintshiselwano lukhulu lwe-crypto emhlabeni
Sorare: zeziphi iintshatsheli ezikhoyo ehlotyeni? Ihlaziywe ngo-2022